Manome - Serivisy ara-dalàna an'ny fanjakana Prairie
Miantso hanome amin'ny alàlan'ny telefaona:
Manome amin'ny Internet:
Tsindrio ny bokotra "DONATE NOW" etsy ambany
Fanomezana mailaka ho an'i:
Reny iray nandositra ny fanararaotana tao an-trano, ny fianakaviana iray voaroaka, na ny veterana iray very tombontsoa: amin'ny fanomezana ny Prairie State Legal Services, ianao dia miara-miasa amin'ny mpisolovava anay sy ny mpiasa anay hanompo ny mpiara-monina aminao sahirana indrindra. Ireto ambany ireto dia vitsivitsy monja amin'ireo fomba ahafahanao miara-miasa aminay:
Amin'ny fanomezana isam-bolana dia asehonao ny fanoloranao tena ho an'ny iraka ampanaovina anay hanomezana ny fidirana mitovy amin'ny fahamarinana. Rehefa manome isam-bolana ianao dia esorina ho azy avy amin'ny kaontinao amin'ny datin'ny safidinao ny vola nofidinao.
Fiaraha-miasa / fanampiana isan-taona
Raha liana amin'ny fanohanana ny iray amin'ireo hetsika marobe eto an-toerana ny orinasanao na ny orinasanao dia mandefasa mailaka amin'i Jennifer Luczkowiak, talen'ny fampandrosoana, ao amin'ny [email voaaro].
Stock / IRAS
Ny fanomezana azo antoka dia ny famindrana tahiry, fatorana ary fiarovana hafa, indrindra ireo izay nitombo ny sandany. Raha mila torolàlana momba ny fanomezana fanomezana fiarovana ho an'ny fanjakana Prairie dia mifandraisa azafady amin'ny biraom-panjakana Prairie State (815) 965-2134.
mankalazà miaraka aminay
Azonao atao ny manome ho an'ny fanjakana Prairie ho fanomezam-boninahitra na fahatsiarovana hetsika manokana na olona iray.
PROGRAMA FIVORIANA MATCHING
Raha mifanandrify amin'ny fanomezana ny mpampiasa anao dia mety ho azonao atao avo roa heny na avo telo heny ny fanomezana ataonao. Matetika ny fandaharam-pifanomezana fanomezana dia mifanandrify amin'ny fanomezana rehetra ataon'ny mpiasa amin'ny fikambanana mpanao asa soa. Mifandraisa amin'ny loharanom-pahalalan'ny mpampiasa anao hianaranao raha manolotra programa fanomezana mitovy amin'izany izy ireo.
Ny fepetra tadiavina dia fanambarana tsotra amin'ny sitraponao izay manome ny Prairie State ny iray amin'ireto manaraka ireto:
Vola dolara manokana,
Ampahany voafaritra amin'ny fanananao,
Tanan-trano manokana (toy ny trano na tranom-barotra),
Fananana manokana sarobidy, toy ny sangan'asa.
Raha liana te hianatra bebe kokoa momba ny fanomezana nomanina ianao dia mandefasa mailaka amin'i Jennifer Luczkowiak, talen'ny fampandrosoana, ao amin'ny [email voaaro].
Azonao atao ny mampiroborobo ny fanjakana Prairie amin'ny alàlan'ny fitiavanao anay amin'ny Facebook na amin'ny fanarahana anay amin'ny Instagram sy Twitter. Rehefa mizara ny lahatsoratray ianao dia mampiroborobo ny tanjonay amin'ny fanomezana fidirana mitovy amin'ny fahamarinana amin'ny alàlan'ny fampahafantarana ny fianakavianao sy ny namanao amin'ireo serivisy omenay ny mpiara-monina mila fanampiana. Azonao atao ihany koa ny mamorona fanangonam-bola amin'ny media sosialy amin'ny anaranay.
Olona maro no manome ny fotoanany ho an'ny Prairie State amin'ny alàlan'ny komitin'ny fanangonam-bola eo an-toerana. Raha liana te hianatra bebe kokoa momba ny fanompoana amin'ny komity fitadiavam-bola ianao, mandefasa mailaka amin'i Daniel Nord, Manager of Community Support, ao amin'ny [email voaaro].
Rehefa miantsena amin'ny Amazon Smile ianao dia hanome ampahany amin'ny fividiananao any amin'ny Prairie State Legal Services i Amazon. Raha te hahalala bebe kokoa sy hiantsena dia mitsidika amazon-tsiky.
Raha mila fanontaniana momba ny iray amin'ireo fomba fanomezana ireo dia mifandraisa azafady:
Jennifer Luczkowiak, talen'ny fampandrosoana ao amin'ny (224) 321-5643
Prairie State Legal Services dia fikambanana mpanao asa soa tsy mitady tombom-barotra ary ny fanomezana dia azo alaina amin'ny hetra IRS fizarana 501 (c) (3). Ny fanomezana rehetra dia mahazo fanekena an-tsoratra ary ireo mpamatsy vola dia ekena ao aminay Tatitra isan-taona. Voahaja ny fangatahana hijanona ho tsy fantatra anarana.
Azo esorina ve ny fanomezana ho an'ny hetra ara-dalàna an'ny Prairie State Legal Services?
Eny, azo esorina ny fandraisana anjara; Prairie State Legal Services dia fikambanana mpanao asa soa eo ambanin'ny kaody anatiny momba ny vola miditra 501 (c) (3).
Afaka manao fanomezana ho fanohanana ny biraon'ny PSLS eo an-toerana ve aho?
Raha azo atao, ny fanjakana Prairie dia mampita fanomezana any amin'ny biraon'ny serivisy eo an-toerana eo amin'ny fiarahamonina niavian'ireo fanomezana ireo. Azonao atao ny mitarika ny fanomezanao any amin'ny birao ivelan'ny fiarahamonina misy anao amin'ny fanondroana ny birao nofidinao.
Ahoana no amantarana ny fanomezana?
Ny fanomezana rehetra dia ekena ao amin'ny Tatitra isan-taona. Fanomezana natao tamin'ny alàlan'ny Fanentanana ho an'ny serivisy ara-dalàna matetika dia ekena amin'ny hetsika Campaign, amin'ny diary asan'ny bar ary indraindray amin'ny gazety eo an-toerana. Ny fanomezana dia azo atao ho fanomezam-boninahitra na fahatsiarovana ireo namana, fianakaviana na mpiara-miasa. Omena voninahitra ihany koa ny fangatahana hijanona ho tsy fantatra anarana.
Handray fanamafisana amin'ny fanomezana nataoko ve aho?
Ny fanomezana tsirairay dia ekena ao anaty taratasy iray taorinan'ny nahazoany ilay fanomezana. Isan-taona amin'ny volana Janoary dia mandefa famintinana ny fanomezana rehetra nataon'ny mpamatsy vola tamin'ny taona lasa izahay.
Fialana andraikitra amin'ny LSC
Prairie State Legal Services, Inc. dia vatsian'ny ampahany amin'ny Legal Services Corporation (LSC). Amin'ny maha fepetra ara-bola azony avy amin'ny LSC, dia ferana tsy hiditra amin'ny hetsika sasany amin'ny asany ara-dalàna rehetra izy - ao anatin'izany ny asa tohanan'ny loharanom-bola hafa. Prairie State Legal Services, Inc. dia mety tsy handany vola amin'ny hetsika rehetra voarara amin'ny lalànan'ny Legal Services Corporation, 42 USC 2996, et. seq., na amin'ny alàlan'ny lalànan'ny daholobe 104-134, §504 (a). Public Law 104-134 §504 (d) dia mitaky ny fanomezana fampandrenesana ireo fameperana ireo ho an'ny mpamatsy vola rehetra ny programa vatsian'ny Legal Services Corporation. Azafady mifandraisa amin'ny Biraon'ny Filan-kevi-pitantanana ao amin'ny (815) 965-2134 raha mila fanazavana fanampiny momba ireo fandrarana ireo.
Fianakaviana sy fiarovana. Fantatrao ve fa ny ampahefatry ny tokantrano (26%) amin'ny tokantrano iva dia niaina farafaharatsiny olana iray mifandraika amin'ny raharahan'ny fianakaviana na fiarovana manokana. Ny fihanaky ny aretina dia ambony kokoa amin'ny tokantrano manana zaza latsaky ny 12 taona (44%). Ny olana mahazatra indrindra amin'ny tokantrano rehetra amin'ity faritra ity dia ahitana ny traikefa amin'ny herisetra an-tokantrano (miantraika amin'ny 10% amin'ny tokantrano rehetra), ny olana amin'ny fanangonana na fandoavana ny famelomana zaza (9%), ary ny fisarahana na fisaraham-panambadiana (9%). Loharano: LSC 2021 Justice Gap Survey Survey	... See MoreJereo ny Less